Wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha - BBC News Somali
Wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha
Taageerayaasha ayaa isu soo baxyo ka dhigay magaalooyinka Paris, Lyon, Strasbourg iyo Rouen, in kastoo meelaha qaar ay rabshado isu rogeen damaashaadyadaasi.
Xulka Faransiiska ayaa la gudoonsiin doonaa abaalmarinta dalkaasi ugu saraysa ee loo yaqaan Legion d'Honneur.
Xiddiga Kubadda Cagta ee Cristiano Ronaldo ayaa uga mahadceliyay kooxda Juventus fursadda ay siisay, waxaana uu sheegay in ciyaartooyda da'diisa oo kale ah ay ka dheelaan naadiyada Shiinaha iyo Qatar.
33 jirkan Bortaqiiska u dhashay ayaa ugu wareegay kooxdaasi Talyaaniga ah ka dib markii ay ka bixisay lacag ku dhaw boqol milyan oo Gini.
Ronaldo ayaa shaaca ka qaaday in aanay jirin koox kale oo dalab usoo bandhigtay, waxaana uu sheegay inuu ku dedaali doono sidii uu Juventus uga caawin lahaa hanshada Koobka Horyaalka Yurub.
Ninkan oo dadka qaar ay ku tilmaamaan laacibka adduunka ayaa 9 sano oo u ciyaarayay Real Madrid waxa uu u dhaliyay 450 gool, asagoo kula guulaystay 4 horyaal oo Champions League ah iyo laba Laliga ah.
Laacibkii hore ee Argentina, Diego Maradona, ayaa gudoomiye u noqday kooxda Dynamo Brest ee ka dhisan dalka Belarus, taasoo uu la saxiixday qandaraas 3 sano ah.
Waxa uu sheegay inuu rajeynayo in madaxweynaha dalkaasi, Alexander Lukashenko, uu ka mid noqon doono taageerayaasha kooxdaasi.
Dynamo Brest ayaa laba sano ka hor waxaa musalafid ka badbaadiyay maalqabeen Imaaraati ah.
Maradona ayaa dhawaan ka tegi doonna shaqada tababarennimo ee uu ka hayo kooxda Al-Fujairah ee ka dhisan Isutagga Imaaraadka Carabta
Ilhaan Cumar: "Waa in magdhow la siiyo" ehellada dadka uu Mareykanka ku 'dilay' Soomaaliya
Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale sheegtay sheegtay in magdhow la siinayo dadka ay dhibaatada ka soo gartay duqeynta Mareykanka ee Soomaaliya uu ka fuliyo.
Mareykanka oo laga helay cudur kale oo maskaxda bani'aadanka cuna
Tan iyo sanadkii 1962-kii, gobolka Florida ee dalka Mareykanka waxaa laga helay 37 kiis oo ah cudurkan dilaaga ah ee weerara unugyada maskaxda bani'aadanka.
Gabadha ayaa hooyadeed u sheegay in guddomiyihii tuulada ee ay raacini jirtay uu falkaasi sameeyay uuna ku yiri haddii aad sameeyni weydo waxaan kuugu irahdo sawirkaaga oo qaawan ayaan baraha bulshada ku faafinayaa.
Khaladaadka uu Donald Trump ka aaminsan yahay Soomaaliya
Soomaaliya waxay bartamaha u gashay ololaha doorashada Mareykanka - taas waxaa sabab u ah Donald Trump, waxaana eegaya Ismaaciil Ceynanshe.
"13 sano jir ayaan ahaa markii aan bilaabayay isticmaalka dawada la isku cadeeyo"
Maxay tahay dowladda ay Somaliland xiriirka la yeelatay ee Taiwan?